Maktabadda Guud ee Cadaado – Sen. Abshir Axmad
Mid ka mid ah tiirarka aan doorashadeyda ku soo galay wuxuu ahaa awood siinta dhallinyarada aniga oo u maraya kobcinta garaadkooda, ku dhiirogelinta is afgarad dhexdooda ah, u qabashada kulamo isweydaarsi afkaar iyo iskaashi ah. Si loo xaqiijiyo yoolkaas iyo himilada dhallinyarada ay hiigsanayaan ayuu Xafiiskeyga Adeega Dadweynaha hirgeliyey sannadii 2018 Maktabad Guud oo ay yeelato degmada Cadaado taas oo noqonaysa goob dhallinyaradu wax ku akhristaan, kulamo ku yeeshaan, iskuna bartaan oo ay afkaaraha isku weydaarsadaan. Maktabaddu waxaa hada ku keydsan in ka badan 3400 oo buug oo daboolayada maadooyin kala duwan oo ku qoran afafka Soomaaliga, Carabiga iyo Igiriiska.
Marka laga soo tago hadafka loo aasaasay oo ah fursad siinta dhallinyarada in ay isdhexgalaan, isdhaafsadaan afkaaro, yeeshaan doodo aqoon isweydaarsi ah, haddana maktabaddu waxa ay hooy u tahay kor u qaadista iyo taabogelinta dhaqanka akhris-qoraalka, uruurinta suugaanta, kaydinta hidaha iyo dhaqanka Ummadda Soomaaliyeed.
Maktabadda Guud ee Cadaado waxa ay sidoo kale hiigsaneysaa qabashada tartamo lagu kobcinayo qoraalka qormooyinka iyo sheekooyinka iyo barnaamijyo kor loogu qaadayo garaadka bulshada iyada oo la kaashaneysa hay’adaha iyo ururrada ku hawlan arrimahaas.